kitiho eto fa ny FSX vahaolana azo itokisana
Eto dia ny angidimby maso tsara, tarihin'ny AlphaSim. Taloha payware, satria 2009 dia nanjary freeware, ka tokony manararaotra!
Voalohany angidimby entana asa, ny S 55 A H19 novokarin'ny ny Etazonia Sikorsky mafy, nanao ny sidina miasa voalohany November 12, 1949. Ao 1952, dia nahazo ny taratasy fanamarinana ny sivily airworthiness.
Ny lanjan'ny sy ny ampahany amin'ny fitaovana toerana raha ao am-pototry ny elany voarara ny fametrahana ny kamehana ny tokana Fanodina angidimby. Ny injeniera Igor Sikorsky nanana hevitra ny trano ny milina teo anoloan'ny fiaramanidina sy ny fiara mifono vy eo ambany gorodona, nanjera an'ilay mpandeha mampitohy ambonin'ny maotera. Ity fandaharana dia toy izany no nanafaka ny toerana iray mifantoka kamehana.
Ny S 55 dia toy ny mikitoantoana telo-bladed rijan Fanodina flapping sy tarihiny, miaraka amin'ny roa-bladed rambony Fanodina sy ny fiaran-dalamby quadricycle. Ny kamehana mamela ny mitondra izany ny 6 mba 8 mpandeha na enina filanjana nitombo ny fitsaboana ny naratra nandritra ny fitaterana.
Namingana ao amin'ny faramparan'ny 50s ny mahery 58 S, S 55, ao amin'ny dikan-maro, naorina ho 1280 gazety. Ny fahazoan-dalana dia azony ny Frantsa, Japana sy Grande-Bretagne. Ny Britanika hentitra Westland hanolotra an'i Frantsa 42 I 55 izay any am-pianarana sy GH2 (Alzeria). (Source: www.museehelico-alat.com)
Downloads 7 517